Fududeeyaha Ogolaanshaha Ganacsiga Yaryar ee Cusub iyo Adeegyada Ogolaanshaha Gaarka ah
Adeegyada ogolaanshaha degdega ah ee buuxinta dukaamada banaan ee bartamaha magaalada iyo ganacsadaha yaryar ee magaalada oo dhan
Aagagga sharciga cusub ee u oggolaanaya kala duwanaansho ballaaran iyo kororka dabacsanaanta isticmaalka bakhaarrada bannaan.
Waaxda Dhismaha iyo Kormeerka Seattle (SDCI) waxay hadda bixinaysaa adeegyo oggolaansho u go’an oo loogu talagalay kiraystayaasha mustaqbalka ee dukaamada bannaan ee magaalada ee bartamaha iyo ganacsiyada yaryar ee magaalada oo dhan. Kiraystayaasha magaalada bartamaha iyo ganacsadaha yaryar ayaa si aan qiyaas lahayn u saameeyay cudurkan. Hadafka adeegan cusub waa in la siiyo tababar hore kiraystayaasha ka hor saxeexa heshiiska, si loo yareeyo shuruudaha qaaliga ah, iyo dejinta ganacsiyo si ay u guuleystaan iyada oo la yareynayo wakhtiga ay qaadanayso helitaanka ogolaanshaha.
Bishii Ogosto 2021, sharci cusub ayaa la ansixiyay si ay u bixiso dabacsanaan dheeraad ah nooca ganacsiyada loo oggol yahay heerka waddooyinka ee bartamaha magaalada oo lagu dhiirigeliyo isticmaalka meelahan isticmaaleyaal badan oo kala duwan oo ay ku jiraan ganacsiyo waratada ah, tas-hiilaad farshaxan, iyo goobo samayn. Si loo taageero dabacsanaantan iyo soo kabashada sii kordhaysa ee magaalada hoose, ganacsi kasta oo doonaya in uu qabsado meel bannaan oo bakhaar ah oo bannaan oo ku taal badhtamaha magaalada (eeg khariidadda) waxa uu heli karaa tababar oggolaansho u go’an oo laga helo hal meel oo lagala xidhiidho SDCI iyo hannaanka oggolaanshaha la dedejiyey.
SDCI waxay iskaashi la samaynaysaa Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha (OED) si ay u siiso adeegyo ogolaansho degdeg ah ganacsiyada yaryar (50 shaqaale ama ka yar) iyo kuwa yaryar (5 shaqaale ama ka yar). OED waxay diyaar u tahay inay ka caawiso ganacsiyada yaryar iyo kuwa aad u yaryar oo micro ah inay maraan agabyada jira, fursadaha maalgelinta, iyo sidoo kale shuruudaha iyo xeerarka si ay ganacsi uga shaqeeyaan Seattle. Iskaashatada SDCI iyo OED waxay sidoo kale taageeri doontaa helitaanka ganacsiga ilaha dhaqaale, adeegyada naqshadaynta goobta ganacsiga, iyo adeegyada ogolaanshaha barnaamijka sida Barnaamijka Horumarinta Kiraystaha.
Adeegyada la siiyo codsadayaasha ogolaanshaha u qalma waxaa ka mid ah:
Cilmi-baaris iyo tababar hore oo ogolaansho ah
Fududeeyaha ayaa baari doona hantida inta badan macluumaadka ogolaanshaha hadda
Raadso inaad yarayso shuruudaha qaaliga ah ee ku dari kara kharashka dhismaha ama kakanaanta nooca ogolaanshaha
Dib u eeg shayga ogolaanshaha codsiga dhamaystirka ka hor inta aan la gudbin
Adeegyada oggolaanshaha degdega ah
Ballanta mudnaanta leh ee codsigaaga oggolaanshaha
Wakhtiga la dhimay ee dhamaystirka dib u eegista qorshaha
La soco in waaxaha kale iyo dib u eegisyada ka baxsan SDCI laga yaabo in wali loo baahdo oo ay leeyihiin waqtiyo kala duwan
Meesha kaliya ee lagala xiriiro ogolaanshaha codsadaha
Fadlan la xiriir Peter Fuerbringer a Peter.Fuerbringer@Seattle.govor wac (206) 233-7013 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan helitaanka ogolaanshaha dukaan banaan oo ku yaal bartamaha magaalada.
Fadlan kala xiriir Ken Takahashi oo ka tirsan Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha at Ken.Takahashi@seattle.gov wixii macluumaad ah ee ku saabsan helitaanka agabka/gargaarka ogolaanshaha ganacsi ahaan ahaan. Sidoo kale u fiirso toOED website-ka macluumaadka ku saabsan barnaamijyada mustaqbalka.